डिजिटल दैनिक | Digital Dainik | Page 4
2018-04-10 डिजिटल दैनिक Leaveacomment
काठमाडौं, चैत्र २७ः सरकारले गरिब, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समूदायका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरिदिन आह्वान गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित गरिव, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समूदायका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरिदिन सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, उद्योगी, व्यापारी, शिक्षाप्रेमी, अभिभावक संघ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संचारकर्मीलगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आह्वान गरेको हो ।
शिक्षाको अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विद्यालय भर्ना गर्न सबैमा आह्वान गर्नु परेको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सचिवमा भने डिल्लीराज घिमिरेलाई बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ । बैठकमा यातायात समितिहरु नविकरण नगर्ने प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
\_यस्तै आजको बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकबारे निर्णय गर्न सकेन।
आईजीपी नियुक्तिबारे सरकार ‘अनिर्णीत’, आज पनि भएन निर्णय
काठमाडौं, चैत्र २७ः सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिबारे आज निर्णय गर्न सकेन ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीको म्याद भोली अर्थात चैत २८ गते ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण सकिने भएपछि आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजीपी नियुक्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आईजीपीबारे कुनै निर्णय भएन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुवै आइजीपीसँगै नेपाल प्रहरीका सात जना एआईजीको पनि म्याद सकिदैछ । आइजीसँगै एआइजीको पनि म्याद सकिने भएपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजीबाट आइजीपी नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आइजीपी बन्ने लाइनमा तीन डिआईजी छन् । डिआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, रमेश खरेल, आइजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल आइजीपीको दावेदार मानिन्छन् ।
यसैवीच गृहमन्त्रालयले आइजीपी छनोटका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्ने बताइएको छ । समितिले आइजीपीको लाइनमा रहेका डिआइजीको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत विवरण अध्ययनका लागि सोमबार मागेको श्रोतले बताएको छ ।
यति एयरलाइन्सको जहाजको पांग्रा ‘लक’ भएपछि पोखरा विमानस्थल बन्द
काठमाडौं, चैत्र २७ः काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज अवतरणको क्रममा अगाडिको पांग्रा ‘लक’ भएपछि पोखरा विमानस्थल बन्द गरिएको छ।
अवतरण भएर पार्किङ वेतिर जाने क्रमममा पांग्रा नचलेपछि जहाज अगाडि बढ्न नसकेको विमानस्थलले जनाएको छ । दिउसो सवा १ बजेतिर जहाज रोकिएपछि विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द भएको कार्यालयलेले जानकारी दिएको छ।
२८ जना यात्रु लिएर पोखरा उडेको यतिको ‘९–एनएएचयू’ दर्ता नम्बर भएको विमानको प्राविधिक जाँच भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौंका गएको प्राविधिक टोलीले मर्मतको प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल भएको छैन। विमानमा सवार सबै सुरक्षित रहेका छन् ।
तोकियो प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब, हेर्नुहोस् कसको तलब कति ?
काठमाडौं, चैत्र २७ः प्रदेश ४ को सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ कायम गरेको छ।
मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। सबैलाई आवास, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, अथिति सत्कार लगाएतका सुबिधा थप छन् ।
विधेयक प्रदेशस भाको चैत १२ को प्रदेशसभामा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा मन्त्री चुमानले विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेकोमा ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतले पारित भएको हो।
विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास सविधा, विदेश जादा भत्ताको २ सय ५० डलर दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैबीच प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको छ।
आज काँग्रेसको स्थापना दिवस, देउवाले दिए यस्तो शुभकामना
काठमाडौं, चैत्र २७ः आज काँग्रेसको स्थापना दिवस । आजबाट काँग्रेस ६८ बर्षको भएको हो । चैत्र २७ गते २००७ सालमा काँग्रेसको स्थापना भएको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थापना दिवसका अवसरमा शुधकामना दिदै भनेका छन्,‘नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको आज ६८ बर्ष पुगेको अवसरमा सबै लोकतन्त्रवादी साथिहरु, नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहमा रहनुभएका मित्रहरु लगायत सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
’आज चैत २७ गतेकै दिन २००६ सालमा नेपाली राष्टिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको कांग्रेसले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सफल हुदै २०३६ सालको जनममत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको प्रजातन्त्र बहाली, २०६२र०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुदै संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गरी कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले संविधान अनुसारका तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरी मुलुकलको एउटा राजनीतिक अध्याय पुरा गराउदै स्थायित्वतर्फ अघि बढाएको छ ।
‘आज म नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरु, विभिन्न आन्दोलनमा ज्यानको आहुती दिने शहिदहरु लगायत विभिन्न रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा नेपाली कांग्रेसको जन्मदिनको अवसरमा पुन हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिदै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । ’
काँग्रेसले भन्यो,‘ओली सरकारको श्वेतपत्र ‘लालपत्र’ मात्रै’
2018-04-09 डिजिटल दैनिक Leaveacomment
काठमाडौं, चैत्र २६ः नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रलाई ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत रहेको काँग्रेसले सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले श्वेतपत्रबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउन सरकारले आफ्नो अनुकुल तथ्यहरुलाई समेटेर सरकारले श्वेतपत्र ल्याएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आशा र भरोसा दिनुपर्नेमा ढुकुटी रित्तो भएको भनेर भ्रम छार्न खोजिएको शर्माले बताए । ‘सरकारले हामीले शुन्यबाट सम्बृद्धिको यात्रा सुरु गरेको भनेर भ्रम छर्न खोज्यो,इतिहासमा भएको कामलाई अवमुल्यन गरियो’,शर्माले भने ।
कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको निधनको कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरेको कारण स्वेतपत्रमा आधिकारिक धारणा राख्न ढिलो भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
चैत १६ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तिएको बताएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण पाठ :
सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं, चैत्र २६ः सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर काले बम्जनलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बोर्डर आउट पोष्ट कप्तानगञ्ज सुनसरीमाको इन्चार्ज समेत रहेका बम्जनले मातहतका सुरक्षा अधिकारीसँग मिलेर घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बिओपी कप्तानगञ्जमा कार्यरत जवान ठाकुर खत्री र नविन खड्काले भारतिय नम्बर प्लेटको गाडी छुटाइदिने प्रयोजनका लागी घुस मागेपछि आयोगले चैत १३ गते २५ हजार घुस सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सोही घटनामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कार्यालय प्रमुख समेत रहेका शसस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर काले बम्जनको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि नियन्त्रणमा लिईएको आयोगले जनाएको छ ।
बिदा कटौतीको विरोधमा जनजाति महासंघ सडकमा उत्रने
काठमाडौं, चैत्र २६ः आदिवासी जनजाति महासंघले सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको विदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाव दिएको छ ।
महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दबावमुलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो । ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको सांस्कृतिक पर्वका सार्वजनिक विदा कटौती गरिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार चैत्र २७ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभर विरोध, प्रर्दशन, धर्ना दिने लगायत छन् ।
महासंघले सडक विस्तारको नाममा आफूहरुको सांस्कृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण नरोके प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।
प्रहरी जवानको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ९२८ उत्तीर्ण (नामसहित)
काठमाडौं, चैत्र २६ः नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान जनपदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गएको फागुन १२ गते प्रहरी जवान पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।
उत्तीर्ण भएकाहरुको अन्तर्वार्ता ०७४ कार्तिक १५ गते हुने पनि जनाइएको छ ।
नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
माओवादी मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट, के भने प्रचण्डलाई भेटेर !
काठमाडौं, चैत्र २६ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा ‘एकलौटी’ निर्णय लिन थालेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आज पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरी गुनासो राखेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा भएको छलफलमा एकैपटक ३० सचिव सरुवा लगायत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल र मन्त्रीसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेको माओवादी मन्त्रीहरुको गुनासो थियो । यही गुनासो लिएर उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन् ।
अन्य मन्त्रालयसँग भएका अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगिएकोमा पनि माओवादी मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन् । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार उनीहरुले प्रचण्डसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कार्यशैली ठीक’ नभएको र यस विषयमा गंभीर कुरा गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले माओवादीका मात्रै होइन, एमालेकै तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पनि चक्मा दिएको प्रचण्डलाई जानकारी गराएको ती मन्त्रीले बताए । गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको माओवादीको गुनासो गर्दै आएको थियो ।
भेटका क्रममा मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका कामबारे प्रचण्डलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिए ।
« 123456… 1,242 »